Wasiirka Gaashaandhigga oo xaqiijiyay in Qalbi Dhagax uu kamid ahaa Ciidamadii Xooga Dalka
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa sheegay in C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax) uu ka tirsanaa Ciidamadda xoogga dalka, kana soo qeyb qaatay dagaalkii 1977. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu wasiirka ku sheegay in Mr Qalbi Dhagax uu muddo 17 sanno ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan Guutada 21aad. “Waxaa xaqiijinayaa...
Ciidamada Jubbaland oo Al-Shabaab ku jabiyay dagaal ka dhacay Buulo Guduud
Ururka Al-Shabaab ayaa xalay goor danbe weerar ku qaaday deegaanka Buulo Guduud halkaas oo ay fariisin ku leeyahiin Ciidamada Jubbaland. Dagaalka oo saacado badan qaatay ayay sarakiisha Ciidamadu sheeegeen in lagu jabiyay Al-Shabaab isla markana uu khasaare kasoo gaaray inkasto aan tirada la hayn. ” Ciidamada Jubbaland way is difaaceen Al-Shabaabna waan jabinay ”...
Kenyatta oo ku tilmaamay burcad garsoorayaasha Maxkamada sare
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku tilmaamay guddomiyaha maxkmadda sare Kenya David Maraga iyo garsooreyaasha maxkamadaas kuwa ”burcad ah”. Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay meel fagaare ah ayaa u muuqday qof ka careysan go’aanka maxkamadda sare, waxaana ku xigeenkiisa Willima Ruto uu sidoo kale sheegay in afar qof oo uu ula jeedo garsooreyaashii xukmiyay go’aanka...
Maraykanka oo gantaal ku dilay sargaal katirsanaa Al-Shabaab
Hogaanka ciidmada Maraykanka ee qaarada Afrika ee Africom ayaa sheegay in gantaal ay ku dileen sarkaal ka tirsan Alshabaab mid kalana ku dhaawaceen duleedka degmada Baraawe ee gobolka Sh/hoose. Duqeyntan ayaa waxaa fuliyay mid kamid ah diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn mana jiro warar ka madax banaan sheegashada Maraykanka oo rumaynaya warkan Dowladda Mareykanka...
Ciidamada Jubbaland oo kala Eryay dibadbax lagaga soo horjeeday Madaxweyne Farmaajo
Boqolaal dadweyne ah ayaa maanta isugu soo baxay fagaarayaal ku yaala Magaalada kismaayo kuwaas oo saluugsanaa sida Dowlada Federaalka ah ay Qalbi Dhagax ugu wareejisay Dowlada Itoobiya. Dadkan ayaa ku dhawaaqayay halku dhagyo ka dhan ah Madaxweynaha Federaalka Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Xukuumada Xasan Cali Khayre iyadoo markii danbe ay isku dheceen Ciidamada Amaanka...
Madaxweynaha Jubbaland oo salaada ciida la tukaday Dadweynaha ree Kismaayo (SAWIRRO)
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta qaar kamid ah dadweynaha ree Kismaayo kula tukaday Xarunta Madaxtooyada Salaada Ciidul Adxa. Madaxweyne ku xigeenka koobad Mudane Maxamuud Sayid Aadan xubno katirsan labada gole ee Dowlada iyo dad shacab ah ayaa kamid ahaa dadka uu Madaxweynahu kula tukaday qasriga Madaxtooyada. Madaxweyne...
Dhamaan Shaqaalaha iyo hawlwadenada Shabakada Jubbalandi waxay umada Soomaaliyeed ugu hambalyaynayaan Munaasabada qiimaha leh ee ciidul Adxa oo dhamaan dunida Islaamku ay maanta u dabaal dagayaan. ...
Itoobiya oo xaqiijisay in lagu wareejiyay Qalbi Dhagax
Xukuumada Itoobiya ayaa sheegtay in lagu soo wareejiyay Cabdikariim Sheekh Muuse oo Qalbi Dhagax loo yaqaano kaas oo katirsanaa ururka ONLF. Wasiirka Warfaafinta Itoobiya Dr. NEGERI Lencho, ayaa Idaacada VOA u sheegay in ninka ay usoo gacan galisay Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay heshiis kula jiraan. “Waxaan kuu xaqijiyay in Ethiopia loo soo...
Meydadka dadkii lagu dilay deegaanka Bariire oo maanta la Aasay
Meydadka dadkan oo lagu laayay weerar dhawaan ka dhacay deegaanka Bariire ayaa maanta lagu aasay qubuuraha isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho. Meydadkan oo gaaraya ilaa 10 qof ayaa ku dhintay hawlgal xili aroor ah ay halkaas ka sameeyeen Ciidamo Maraykan ah iyo kuwa Soomaalida. Ehelada dadka dhintay Xildhibaano siyaasiyiin iyo wax garad kala duwan ayaa ka qayb galay...
RASMI: ONLF oo xaqiijisay in C/kariin Qalbi Dhagax Itoobiya lagu wareejiyay
Ururka ONLF ayaa sheegay in Dowlada Federaalka ah ay C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ku wareejisay Dowlada Itoobiya. war Qoraal ah oo ururku uu soo saaray kuna qoran luuqada Ingriiska ayay ku faah faahiyeen qaabka Qalbi Dhagax ay kula wareegtay Itoobiya. “Qalbi Dhagax Sadexdii sano ee lasoo dhaafay wuxuu daganaa Magaalada Muqdisho oo arimo caafimaad u joogay...
Madaxweyne Farmaajo “Dalkaan ma kala go’ayo,”
Madaxweynaha Dowlada federaalka ah Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sheegay in Soomaalida ay tahay dad mid ah oo aan kala go’ karin, isagoo xusay in si walba oo midnimada dalka lagu ilaalin karo uu diyaar u yahay inuu sameeyo. “Dalkaan ma kala go’ayo, caalamkana ma rabaan in Soomaali kala go’do, dadka rasmiga ah ma rabaan in la kala go’o, waxaa ka shaqeyneynaa...